दुबईबाट आउने सुन तस्करीको ‘स्टिङ अपरेसन’ गर्दा विमानस्थलले ५ घण्टा थुनेपछि… || सुनौलो नेपाल
दुबईबाट आउने सुन तस्करीको ‘स्टिङ अपरेसन’ गर्दा विमानस्थलले ५ घण्टा थुनेपछि…
२०७४ जेठ १६ गते राति टिभी अन्नपूर्णको फेसबुक पेजमा एक व्यक्तिले मेसेज पठाए। ‘फ्लाई दुबईको उडान नं. एफजेड ५७१ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बिहीबार दिउँसो ३ः४० बजे अवतरण गर्दैछ। त्यो उडानबाट सुनका १० बिस्कुट आउँदैछन्। त्यो सुन ल्याउने व्यक्तिले पार्किङ क्षेत्रमा महिलालाई झोला दिनेछन्।’
सुन तस्करी प्रकरणले देशैभरि चर्चा भएको अवस्थामा यो सूचना हाम्रा लागि निकै महत्वपूर्ण हुनु स्वभाविकै थियो। सन् २०१६ मा अनलाइन टिभी अन्नपूर्ण सञ्चालनमा ल्याएदेखि हामीलाई फेसबुकमा यस्ता सूचना पहिला पनि आउने गरेका थिए। तर यो विशेष थियो। याेबारे हामीले समाचार कक्षका साथीहरुसँग छलफल गर्याें। निकैबेरकाे छलफलपछि विमानस्थलमा ‘स्टिङ अपरेसन’ सञ्चालन गर्ने निष्कर्ष निकालौं। दुई हिडन क्यामेरा र ४ वटा ठूलो क्यामेरासहित पाँच जनाको हाम्रो टोली विमानस्थलमा तैनाथ हुने र दुबईबाट आएको सुनको भिडियाे जसरी पनि हाम्राे लेन्सले कैद गर्ने योजना बन्यो।
प्रहरी र विमानस्थललाइ पूर्व जानकारी
तर विमानस्थलजस्तो सम्वेदनशील स्थानमा पूर्वजानकारी बिना भिडियो खिच्न जाँदा लफडा पनि हुनसक्ने ठानेर मैले बिहीबार बिहान ११ बजे विमानस्थलका प्रबन्धक राजकुमार क्षेत्रीको मोबाइल नम्बर ९८५१०६७८३४ मा फोन डायल गरेँ।
‘हुन्छ आएर खिच्न सक्नुहुन्छ’, उनले भने।
मैले ट्याक्सी पार्किङ क्षेत्रको भिडियो खिच्न अनुमति मागेको थिएँ। त्यसमा उनको नाइनास्ती रहेन। विमानस्थल प्रशासनलाई मात्र हुँदैन त्यहाँ सदा पोशाकसहित बाक्लै प्रहरी परिचालन हुन्छन् भन्ने साथीहरुले कुरा आयो। त्यसपछि मैले डिआईजी पंकज श्रेष्ठलाई फोन डायल गरेँ।
उनी त रिटायर्ड भइसकेका रहेछन्। मैले फोन गरेका तेस्रो व्यक्ति थिए डिएसपी कमल जिटी। उनले एसएसपी सा’पसँग कुराकानी गर्नुहोस् भन्ने जवाफ दिए। त्यसपछि मैले क्षेत्रीलाईजस्तै सबै विवरण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित एसएसपी देव बोगटी सुनाए।
‘आउनुहोस् न भइहाल्छ नि। तपाइँहरुलाई के सहयोग गर्नुपर्छ म गरौंला। चाहियो भने केटाहरुलाई पनि भन्दिउँला’, एसएसपी बोगटीले टेलिफोनमा भने।
दुबईबाट आउने सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिन्छ भन्ने सुन समितिको अनुसन्धानले पुष्टि गरिसकेको थियो। तर सुन कसरी आउँछ र त्यो यहाँ कसरी तस्कर च्यानलमा वितरण हुन्छ भन्ने कसैसँग पनि भिडियो थिएन। त्यसमाथि सुन तस्करीविरुद्ध लागेको सरकारकै पालामा त्रिुभवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुन भित्रिएको भिडियो सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कोशेढुंगा हुने निश्चित थियो। यिनै कुरा मनमा खेलाउँदै र एफजेड ५७१ उडान सम्पूर्ण विवरण हेरिसकेपछि हामी करिब २ बजेतिर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुग्यौं।
महिलाले ल्याेकाे सामग्री हवल्दारलाइ दिइन्
एउटा क्यामेरा आगमन कक्षनेर सेट गर्यौं जहाँ विमानबाट आएका यात्रु चेकआउट भएर बाहिर निस्किन्छन्। एउटा विमानस्थलको मुख्य चोक अर्थात् पानीको फोहोरा भएठाउँमा राख्यौं। पार्किङमा हिडन क्यामेरा भएका साथीहरु बसे। करिब २० मिनेट जति भिडियो खिच्यौं। त्यसपछि भोक लागेकाले खाजा खायौं- भुटन चिउरा।
पानीको फोहोरा भएको ठाउँनेर उभिएर दक्षिणतर्फको विमानस्थलका डिर्पाचर गेट र पार्किङतिर आँखा लगाइरहेको थियौं। एफजेड ५७१ कतिबेला अवतरण हुन्छ भन्ने कुराले बेचैन बनाइरहेको थियो। पानीको फोहोरा छेउमा खाली ठाउँमा छ। त्यसको दक्षिण पश्चिमपट्टि पार्किङ छ। त्यतिबेला करिब ३ बजेको थियो। विमानस्थलको स्टाफ निस्कने गेटबाट एक महिला निस्किइनँ। र उनले युनिफर्मममा रहेका एक प्रहरीलाई सेतो प्लाष्टिकले माेरेकाे एउटा सानाे झोला जस्ताे वस्तु दिइन्। मैले फूली हेरेर पहिचान गरेँ उनी हवल्दार रहेछन्। हामीले त्यो भिडियो कैद गर्याैं। सेतोसेतो देखिने त्यो सामान लिएर प्रहरी हवल्दार विमानस्थल पार्किङको पल्लोछेउ पुगे। विमानस्थलको बाहिरी भागको एक फन्को लगाए। र घुम्दैफिर्दै हामी नजिक आइपुगे। उनको व्यवहार शंकास्पद देखिएकाले मेरा आँखाले उनलाई पछ्याइरहेका थिए। त्यही बेला हामी उभिएकै ठाउँमा एउटा ट्याक्सी अाएर घ्याच्च राेकियाे। ती हवल्दारले त्यही ट्याक्सी खाेजिरहेका रहेछन्। त्यहाँभित्र रहेका एक व्यक्तिलाई उनले त्याे सामान दिए।
‘यो के सामान दिनुभएको हो हवल्दार साप ?’ उनको नजिक पुगेर मैले सोधेँ,
प्रश्न सुन्नासाथ उनी छाँगाबाट खसेजस्तो भए। हडबडाए। अत्तालिए। मैले स्थितिलाई सहज पार्न आफू सञ्चारकर्मी भएको उल्लेख गरेँ। प्रेस पास देखाएँ।
‘तैँले कसको अनुमतिमा भिडियो खिचिस् ?’ उनले भनेँ।
‘विमानस्थलस्थित एसएसपी र विमानस्थलकै प्रबन्धकको अनुमतिमा खिचेको हो’, मैले भनेँ। हामीबीच यति भनाभन भइसक्दा ट्याक्सी त्यहाँबाट हिँडिसकेको थियो। मैले ट्याक्सीको नम्बर टिप्न भ्याइँ।
त्यतिन्जेलसम्म हवल्दारले हाम्रा क्यामेरा एवं मोबाइल जफत गरिसकेका थिए। हवल्दारले हामीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्रको कोठामा पु¥याए। त्यहाँ तिनै सामान दिने महिला बसिरहेकी थिइन्।
‘यो भिडियो अहिलै डिलिट गर् नत्र तिमेरु सबैलाई थुन्छु’, उनले धम्की दिइन्। हामीले कुनै हालतमा पनि भिडियो डिलिट नगर्ने अड्डी कस्यौं। किन भिडियो डिलिट गर्ने? चित्तबुझ्दो जवाफ उनीसँग थिएन।
थुनामै रहँदा अवतरण भयाे एफजेड ५५१
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट यत्रो सुन तस्करी भइरहेको छ। तपाइँले प्रहरी हवल्दारमार्फत् ट्याक्सीमा पठाएको सामान के हो खुलाउनुहोस् भन्दा उनी ज्यान गए बताउन तयार भइनन्। मैले ठाने सामान्य चिजवस्तु भए पक्कै पनि भिडियो डिलिट गर्नुपर्दैन। सामानलाई गोप्य राख्न जरुरी पर्दैन। यसअघि त्रिुभवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुन रहेका सुटकेश त्यस्तै सेतो प्लाष्टिकले मोरिएर आएका थिए।
यस्तो अवस्थामा भिडियो डिलिट नगरे थुन्छु भन्ने अडानले ‘दालमे कुछ काला हे’ भन्ने स्पष्ट संकत गरेको थियो। कोठाभित्र उनीसँग गलफत्ती चलिरहँदा दिउँसोको ३ः४० त्यहीँ भयो। मैले एफजेड ५५१ उडान सम्झेँ। ठानेँ दुबईबाट फेरि अर्को लट सुन त्रिुभवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुग्यो। तर के गर्नु प्रमण खिच्न आएका हामीहरु जो आफैँ प्रहरी हिरासतमा परिसक्यौं !
गलफत्ती लम्बिएपछि त्यहाँ विमानस्थल प्रबन्धक राजकुमार क्षेत्री आयपुगे। उनले पनि त्यहाँ दूधको साक्षी बिरालो जस्तो कुरा गरे। अनुमति लिएकै छैन भन्ने झुटो कुरा सुनाए। त्यसपछि मैले यो समग्र घटनाको छानवीन गर्ने जिम्मा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) लाई दिउँ। मैले फोन गरेको रेकर्ड टेलिकममा हुन्छ। त्यो पनि उसले निकालेर अनुसन्धान गरोस् भन्ने प्रस्ताव राखेँ। तर उनीहरु तयार हुनु भएनन्। हामीलाई धाकधम्की दिने काम भयो। हेर्दाहेर्दै हाम्रो मिसनले अर्कै ट्विस्ट लियो। करिब ६ घन्टा विमानस्थलभित्र थुनिएको र हाम्रो टोलीमा महिला पनि रहेको हुनाले हिरासतमुक्त हुन दवाब पर्यो। भिडियो डिलिट गर्दा मलाई निकै पीडा बाेध भइरह्याे।
विमानस्थलबाट फर्किएसँगै एक व्यक्तिले फेसबुक मेसेन्जरमा सन्देश पठाए। सामान्य कुराकानीपछि उनले मसँग कफी मिटिङ गर्नुपर्यो भन्ने प्रस्ताव राखे। मैले यो साता व्यस्त रहेकाले सम्भव नभएको बताएँ। टेलिफोन नम्बर मागे, दिएँ। शुक्रबार बिहान ७ बजे उनले फोन गरे। फोन गरेर उनले विमानस्थलमा हिजो भएको प्रकरणबारे उल्लेख गरे। र पहिला हामीबीच कुनै दुस्मनी छैन। यो विषय सेटल डाउन गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राखे।
प्रहरी काेर्रा भन्दै धम्की
मैले यो स्टिङ अपरेसनमा म बाहेक थप ४ जना साथीहरु संलग्न रहेको जानकारी दिँदै समाचार ‘किल’ गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेँ। ‘तैँले मात्र बुझेकाेछस् समाचार भन्दै उनले मुख छोडेर गाली गरे। विमानस्थल प्रकरणबारे बिहीबार राति मैले एउटा फेसबुक स्ट्याटस लेखेको थिएँ। सो विषयलाई लिएर धम्की दिए, ‘फेसबुक स्ट्याटसलाई लिएर म तँलाई साइबर क्राउममा उजुरी हाल्छु। मलाई चिनेको छैनस् क्यापिटल एफएम, सारङ्गी एफएमको प्रमुख हुँ। चिसो छिँडीमा प्रहरीकाे कोर्रा खाँदा थाहा पाउलास्।’
उनले मलाई बलात्कार मुद्दा हाल्ने पनि धम्की दिए। ‘यसरी लेख्न मिल्छ भने म पनि तँलाई रेप केशमा हाल्छु’, उनले भने, ‘राजकुमार क्षेत्रीसँग अनुमति मागेर मात्र हुन्छ। अहिले मेरो मिसेस गएपछि मात्र विमानस्थल सुध्रिएको हो। त्यो स्त्रीलम्पट केही कामको छैन।’
मैले भिडियो प्रमाणसहित भेट्टाए मलाई बलात्कार, ज्यान जे मुद्दा चलाए पनि हुन्छ भन्दै फाेन काटिँदिएँ।
शुक्रबार मात्र थाहा भयो हिजो हामीलाई थुनामा राख्ने महिला त्रिुभवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित सुनिता भारद्वाज रहिछन्। उनी माओवादीको युनियनकी सदस्य रहिछन्। हामी अहिले डिलिट भएको त्यो भिडियो रिकोभर गर्न प्रयास गरिरहेका छौं। अष्ट्रेलिया, अमेरिका र युरोपमा भएका साथीहरुसँग सम्पर्क गरिरहेका छौं। कहिले कहीँ एउटा विषयकाे अनुसन्धान गर्न जाँदा अर्कै विषय फेला पार्नु सामान्य हाे। तर हामीले पूर्व सूचना पाएकाे एफजेड ५७१ काे उडानबाट सुन अायाे अाएन भनेर मलाइ अझै काैतुहल भइरहेछ।
(सुवेदी अनलाइन टिभी अन्नपूर्णका कार्यकारी निर्देशक हुन्)
शुक्र, जेष्ठ १८, २०७५ मा प्रकाशित सुनौलो नेपाल अनलाइनद्वारा संचालित सुनौलो नेपाल टी. भीसंग प्रत्यक्ष जोडिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस